Mandehandeha amin'ny balaonina | Vaovao momba ny dia
Mariela Carril | | Flights
Ny olona dia te-hanidina foana ary ny marina dia ireo fotoana mahasambatra antsika ireo, dia tena tsara amin'io lafiny io. Fiaramanidina, sambon-danitra, angidimby ary na izany fanatanjahan-tena mahaliana sy mampidi-doza izany aza, rehefa mitsambikina ianao avy ao anaty fiaramanidina miaraka amin'ny akanjo manokana, toy ny ramanavy, hanidina manararaotra ny onjan-drivotra. Mahatsiravina!
Saingy tsy isalasalana fa ny iray amin'ireo sidina tsara indrindra sy tsy misy fangarony ao dia ilay nomen'ny balaonina rivotra mafana. Efa nanidina iray ve ianao? Amin'ny faritra maro eto amin'izao tontolo izao dia traikefa atolotra ho an'ny mpandeha ity, koa andao hianatra bebe kokoa momba ity dia nofinofy androany ity.
1 Balaonina rivotra mafana
2 Manidina amin'ny balaonina anio
3 Ny sidina balaonina tsara indrindra eran'izao tontolo izao
Ny fotokevitra fototry ny balaonina izay manidina dia ny rivotra mafana izay mirona hiakatra. Izany no nolazain'i Archimedes rehefa nanambara izy fa "ny vatana iray na tototry ny rano ao anaty tsiranoka iray amin'ny fitsaharana dia miaina tosika miakatra ambony mitovy amin'ny lanjan'ilay tsiranoka nesorina." Io no tsindry hydrostatic o Fitsipiky ny Archimedes, ary mieritreritra balon-drivotra mafana amin'ny fampitahana, ny rivotra no tsiranoka.
Ny balaonina dia, balaonina izay misy lavaka eo ambany, izay misy labozia na loharano hafanana, izay misy rivotra mafana marobe izay, fehezin'ny burner izay iharan'ny kofehy ary mandeha amin'ny lasantsy propane izany matetika.
Avy eo koa ny harona mitondra olona. Tsarovy izany tsy manana propellant ny balaonina ary ny onjan-driaka ihany no mitondra azy ireo, afaka mampiakatra na mampihena ny haavony amin'ny alàlan'ny fanitsiana ny burner.
Toa izany ny niandohan'ny balaonina rivotra mafana dia nanomboka tamin'ny fiandohan'ny taonjato faha-XNUMX, farafaharatsiny ny zavatra niainana voalohany nataon'ny tanan'ny pretra breziliana iray antsoina hoe de Gusmao ary, indrindra, an'ny anadahy Montgolfier, frantsay mihitsy. Taonjato maro taty aoriana, tamin'ny taona 1999, Suisse sy anglisy, Piccard ary Jones, no voalohany nanidina nanerana an'izao tontolo izao tamin'ny balaonina tsy niato tao anatin'ny 19 andro sy 21 ora.
Manidina amin'ny balaonina anio
Manidina amin'ny balaonina anio fahafinaretana ho an'ny mpizahatany izany, fitsangatsanganana moramora ambonin'ny tany izay manome zana-tany mahafinaritra. Azonao atao ny manidina amin'ny balaonina erak'izao tontolo izao, mila orinasa mpizahatany fotsiny ianao izay manome ny tolotra, endrika mahafinaritra ary mpizahatany.
Any Eropa koa dia misy hetsika malaza iray, ny Fetiben'ny balaonina rivotra mafana eropeana, malaza be any Espana sy eran'ny atsimon'ny kaontinanta. Misy namako ato Igualada, Barcelona, ary mandeha foana izy maka sary tena tsara. Ity festival ity dia matetika atao amin'ny volana volana Jolay, fahavaratraNa dia mbola tsy fantatra aza izay hitranga amin'ity taona ity miaraka amin'ny areti-mandringana.
Ny festival Igualada maharitra efatra andro, manomboka ny alakamisy ka hatramin'ny alahady, ary eo amin'ny seranam-piaramanidina Avenida de Catalunya izy io. Mandritra izany andro izany dia misy fifaninanana balaonina, fampirantiana, sidina ary amin'ny alina a famirapiratana amin'ny alina izay iakaran'ireo balaonina amin'ny sidina ary vonoina ireo mpandoro aorian'ny filentehan'ny masoandro. Sarobidy. Ny sidina vao maraina ary hariva ny andro satria, fantatra, ireo roa ireo no fotoana tsara indrindra amin'ny sidina manidina.
Afaka misidina ihany koa ireo mpanatrika fety nefa tsara ny hamandrihana. Tena fotoana manokana sy tsara tarehy isan-taona ny fitsidihana an'i Igualada, satria eo afovoan-tanàna dia misy hetsika maro mifandraika amin'izany, kolontsaina be daholo. Tonga ny mpanamory sy ny balaonina manerana an'izao tontolo izao ary tena misy fanovana sarotra sy mahafinaritra. Angamba amin'ity taona ity dia tsy afaka alamina, ho hitantsika, fa tsy misy isalasalana fa hiverina izy ary tsy maintsy mandeha.
Ny sidina balaonina tsara indrindra eran'izao tontolo izao
Misy toerana fitsangatsanganana sasany izay manolotra sidina rivotra mafana tsy hay hadinoina. Ohatra, Cappadocia, any Torkia. Betsaka ny orinasa ary mahazatra ny fitsangatsanganana: maka anao any amin'ny hotely izy ireo, mitondra anao any amin'ny seranam-piaramanidina aloha be na amin'ny tolakandro alohan'ny maizina, manidina ianao ary raha vao sambanao io misy mari-pankasitrahana sy toast champagne.
Herinandro vitsivitsy lasa izay dia niresaka momba izany izahay Bangar, any Myanmar. Eny, toerana mahafinaritra hafa ny manidina amin'ny balaonina. Amin'ity tranga ity, raha tokony ho tontolon'ny karst misy lava-bato sy tendrontany fotsy no lasa fiangonana sy trano dia ho hitantsika izany tempoly sy stupas Vehivavy aziatika amin'ny sehatry ny maitso sy mena. Akaiky, any Kambodza dia misy sidina ao Angkor Vat.
Raha tianao ny rivotra afrikanina, ny voaly tsara indrindra dia ny balaonina, manana izany amboniny ianao. Serengeti National Park, Tanzania. Mihoatra ny lavitra savanna afrikaa dia fomba fijery tsy manam-paharoa hankafizanao ny fiainana dia izay tsy hitantsika afa-tsy amin'ny fahitalavitra sy amin'ny National Geographic.
Hijery ny trano mimanda sy ny tontolon'ny Brothers Grimm dia misy ny Loire Valley, Frantsa. Nisy 300 mahery indray mandeha trano fiarovana manodidina eto ary na dia tsy dia be loatra aza ny sisa ankehitriny, ireo ao dia harena sarobidy, lova avy amin'ny vanim-potoana hafa. Izy io dia mifangaro amin'ny tendrombohitra, ala, zaridaina ary tanimboaloboka, ankoatr'izay tanàna medieval fivoahana amin'ny carte postale.
Mandritra ny Renirano Li any Sina, ho hitanao eo akaiky ny formations karst Guilin sy Yangshuo. Tsara tarehy ireo sary ireo ary naseho tamina sarimihetsika sy andian-tsarimihetsika isan-karazany, ary koa sary hosodoko sinoa nentim-paharazana. Marina fa afaka mitsidika ny faritra amin'ny alàlan'ny sambo ianao fa tsara ny balaonina amin'ny rivotra mafana.
Teotihuacan, any Mexico, Fahagagana iray hafa hita avy any amin'ny avo izy. ny piramida Avy amin'ny tontolo hafa izy ireo, fananganana mahafinaritra toa futuristic kokoa noho ny taloha. Raha te handray iray amin'ireo dia ireo dia mila manontany fotsiny ianao any Mexico City.
Etazonia manolotra ny azy ihany koa. Firenena midadasika izy io, miaraka amin'ny sary mahafinaritra, ka azonao atao manidina eo amin'ny lohasahan'i Napa na lohasaha Monument any Utah, ny tontolo mahazatra hita amin'ny sarimihetsika Thelma sy Louise o Forrest Gump: canyon, formations rock, tany maina sy mena. Tsy ho lasa lavitra ve ianao? Eny, ao New York Misy sidina miampita ny renirano Genesee sy ny lohasaha misy renirano mahafinaritra. mampiseho ny tsara indrindra amin'ny Mey.
Farany, ny tany taloha an'ny Egypt and Jordan. Tany Egypt dia sidina iray ambonin'ny Lohasahan'ny Mpanjaka no tsy mety tsy hita. Egypt dia ny fonenan'ny tantarantsika, ny fanirianay ny hisambotra sy ny tratran'ny zava-miafina. Thebes, Neily, Luxor, Tempolin'i Matsmety an'ny Mpanjakavavy Hatshepsut, ny Tempolin'i Ramses II ary III… Ary ao Jordania dia fahitana iray hafa koa ny tanin'ny Wadi Rum.
Araka ny hitanao, raha tianao na te-hanidina amin'ny sidina rivotra mafana ianao amin'ny toerana rehetra eto amin'izao tontolo izao dia azonao atao izany. Hiovaova ny faritra, tsy misy hafa. Ny torohevitro dia ny manontany momba ireo orinasa serial sy ireo tompon'andraikitra amin'izany fiarovana. Nisy ny lozam-pifamoivoizana, amin'izao fotoana izao dia tadidiko ilay tany Egypt, nahatsiravina, izay nahafatesan'ny mpizahatany maro, ka ny zava-dehibe dia ny mitandrina ary aza manakarama na inona na inona. Ny ambiny dia ny mankafy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Flights » Ballooning
Morontsiraka La Concha